Dowlada Masar ayaa dalkeeda ka masaafurisey muwaadiniin Soomaaliyeed – STAR FM SOMALIA
Dowlada Masar ayaa la sheegay in ay dalkeeda ka masaafurisey muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed, halka qaar kalana ay Dowlada xabsiga dhigtay, kadib markii ay dadkaasi xir xireen ciidamada amaanka.
Dadka Soomaaliyeed ay Dowlada Masar dalkeeda kasoo musaafurisay ayaa tiradooda lagu sheegay in ka badan 60-qof oo isugu jira rag iyo dumar , waxa ay sidoo kale ay xireen ciidamada amaanka sadax qof oo kale.
Soomaalidan Masar laga soo musaafuriyay ayaa lagu eedeeyay in ay ahaayeen dad si sharci daro ah dalkaasi ku galay isla markaana ay donayan in ay Masar uga sii tahriibaan qaarada Turub.
Dalka Masar ayaa mudooyinkii dambe noqday marin ay maraan dadka u tahriibaya Wadamo kuyaala Qaarada Yurub, waxaana Xeebaha dalkaasi marar kala duwan laga helay meydadka muwadainiin Soomaaliyeed oo badda soo tuftay.
Xildhibaan Dalxa oo sheegay Xabsiyada Muqdisho inay ku xiran yihiin dad Masaakiin ah oo awood loo sheegtay